शिल्पाको कथा ! | Rajatpatonline Nepal's No. 1 Films News Portal
शिल्पाको कथा !
निर्माता छवि ओझा र उनकी चौथो श्रीमती अभिनेत्री शिल्पा पोखरेल बिचको मुद्धा यतिबेला चर्किरहेको छ । हुन त यो एउटा मुद्धा हो । तर, विषय फरक फरक भएकाले यो मुद्धासँग चार वटा विषय जोडिएका छन् । एउटा सम्बन्ध विच्छेद, अर्को मानाचामल, तेस्रो अंश मुद्धा र चौथो बहुविवाह मुद्धा । बहुविवाहको मुद्धा भने छवि ओझाकी जेठी श्रीमती हेमा ओझाले छवि ओझा र शिल्पा पोखरेल दुबैलाई विपक्षी बनाएर हालेको अदालतको कागजमा देखिन्छ । जुन मुद्धाका वकिल स्वागत नेपाल हुन् ।
अधिवक्ता स्वागत नेपालले यो मुद्धामा मिलापत्रको प्रयास भैरहेको रजतपटलाई जानकारी गराएका छन् । चलचित्र क्षेत्रमा ‘बा’ उपनामले चिनिने निर्माता छवि ओझा अर्थात ‘छवि बा’ विगत चार बर्षयता गुमनाम झैँ देखिएका छन् । फिल्म बनाउने फ्याक्ट्रीका रुपमा परिचित ‘छवि बा’ले चार वर्ष यता कुनै फिल्म बनाएको हामीलाई जानकारी छैन । बानेश्वर हाइटमा रहेको उनको अफिस नमस्ते नेपाल पनि त्यहाबाट सारिएको छ । उनको अफिस यतिखेर थापागाउँ स्थित कान्तिपुर फिल्म एकेडेमीको एउटा कोठामा सिमित भएको बुझ्नमा आएको छ । सरसर्ती हेर्दा छवि ओझाको ‘हरिबिजोग’ भएको छ । यतिबेला छवि न्यायको प्रखाईमा छन् ।
शिल्पाको दोस्रो डिभोर्स
शिल्पाले केहि अन्तरवार्ताहरुमा के भनिरहेकि छिन् भने-‘यो भन्दा अघि मेरो कसैसँग अफेअर चाहिँ थियो तर विवाह भएको थिएन । छवि जी नै मेरो पहिलो श्रीमान् हो ।’ तर जुन अदालतमा शिल्पाले छवि ओझालाई सम्बन्ध विच्छेद, अंश र मानाचामलाको मुद्धा हालेकी छन् त्यहि अदालतमा मिति २०६८ साल भदौ ८ गतेका दिन विकाश बस्याल भन्ने व्यक्तिसँग सम्बन्ध विच्छेद अर्थात डिभोर्स भएको मुद्धा नम्बर ३९-०६८-०१८८२ मा उल्लेख गरिएको छ ।
सम्पतिकै लागि छविसँग विवाह ?
‘कानको जाली फुट्नेगरी छविले मलाई छविले कुट्यो’ भनेर हनुमान ढोकामा शिल्पा पोखरेलको तर्फबाट उजुरी परेपछि अबदेखि त्यसो नगर्ने सर्तमा प्रहरीले दुबैलाई राखी मिलापत्र गरेको देखिन्छ । तर, त्यो भन्दा अगाडि नै जिल्ला अदालतमा अंश र मानाचामल सम्बन्धि मुद्धा दायर भएको रहेछ । यसको लागि सम्पतिकै लागि यो सब लफडा भएको हो कि होइन ? यो भने प्रश्नमै सिमित छ ।
तर, शिल्पाले केहि अगाडिका अन्तरवार्ताहरुमा आफुले सम्पतिका लागि विहे नगरेको बताएकी थिईन् ।
आफ्नै त्यत्रो सम्पति छ । त्यत्रो ठुलो फ्याक्ट्रीको मालिककी छोरी । तर, अदालतमा शिल्पाले अंश पाउ भन्ने मुद्धा मात्र दायर गरिनन् मानाचामल समेत भराई पाऊ भन्ने सम्मको मुद्धा ठोकेकी छन्, छवि ओझालाई । मानाचामल भनेको यो मुद्धा किनारा नलागुन्जेल सम्म शिल्पा अलग्गै बस्दाको सम्पूर्ण खर्च छवि ओझाले नै व्यहोर्नु पर्ने अर्थ राख्छ ।
जे होस, अदालतमा सम्बन्ध विच्छेद, अंश सम्बन्धि मुद्धा र माना चामल भराई पाउन भन्ने मुद्धा चलिरहेका कारण यतिखेर निर्माता छवि ओझाका सबै सम्पतिहरु रोक्का भएको छवि ओझाको तर्फबाट मुद्धा लडिरहेका वकिल गणेश केसीले बताए । यतिबेला छवि ओझाले न बैंक खाताबाट पैसा निकाल्न सक्छन न त आफ्नो सम्पति बेचबिखन नै गर्न सक्छन् । छवि यतिबेला अदालतको फैसलाको पर्खाइमा छन् ।
शिल्पाको नयाँ प्रेमी
यत्सै, शिल्पाको नयाँ प्रेम सम्बन्धको विषयले पनि बजार तातिएको छ । शिल्पाको प्रेम भोजपुरी फिल्मका निर्माता तथा निर्देशक सोनु खत्रीसँग भएको हल्ला केहि अघिदेखि नै गाईगुई चल्दै आएको थियो । सोनुकी श्रीमती कोमल खत्रीले हामीलाई पठाएको भिडियोमा सोनु र शिल्पा प्रेममा रहेको बताएकी छन् । अब शिल्पा र सोनुको के सम्बन्ध छ, उनले भने जस्तो हो होइन किटानका साथ् भन्ने स्थिति छैन ।
Previous articleमदनकृष्णको परिवारमा पाँच जनालाई कोरोना संक्रमण
Next articleसुरु भयो ‘बाबरी’को छायांकन
६ बैशाख २०७८, सोमबार १२:२०
सुजन श्रेष्ठ - ६ बैशाख २०७८, सोमबार १२:२०